Jowhar.com : Somali Leader News - News: Daawo sawirada nin daqiiqadii ugu dambaysay daldalaad lagu fulinayay dalka Iran oo la cafiyay
April 24 2014 08:40:09
Daawo sawirada nin daqiiqadii ugu dambaysay daldalaad lagu fulinayay dalka Iran oo la cafiyay
Nin dhalinyaro ah oo toddobo sano kahor dilay nin ay ku dagaalameen dalka Iran ayaa la cafiyay daqiiqadii ugu dambaysay markii lagu fulinayay xukun daldalaad ah.
Bilal oo ah ninka la cafiyay ayaa indhaha laga xiray isla markaana la saaray halkii lagu daldali lahaa iyadoo caado ay u tahay dalka Iran in kursi qofka la daldalayo ay riixdo dadkii lahaa dhiigga qofkii hore loo dilay.
Hase ahaatee hooyada dhashay wiilkii toddobo sano kahor la dilay oo magaciisa lagu sheegay Abdullahi ayaa wajiga ka dharbaaxday Bilaal kadibna ku dhowaaqday in ay cafisay dhiigga wiilkeeda.
Iran ayaa ah dalka labaad ee ugu badan dunida ee lagu fuliyo xukunka dilka ah marka laga reebo Shiinaha sida ay ay shaacisay hay�ada Amnesty International.
Malaayiin ruux ayaa soo dhoweeyay cafiska ay hooyada Cabdullah ay u fidisay Bilal, hase yeeshee Bilal ayaan la sii deyn doonin sida ay sheegayaan wararka oo waxa uu mari doonaa xabsi aan la shaacin mudadiisa.
mahad on April 17 2014
0 Comments · 9099 Reads
Jowhar.com741,456 unique visits